Real Madrid Oo €500 MILYAN Ku Kharash-garaynaysa SADDEX Ciyaartoy, Xiddigaha Ay Calaamadsatay Iyo Zidane Qorsheeyey Sida Ay U Kala Mudan Yihiin – Latest Sports News
Real Madrid Oo €500 MILYAN Ku Kharash-garaynaysa SADDEX Ciyaartoy, Xiddigaha Ay Calaamadsatay Iyo Zidane Qorsheeyey Sida Ay U Kala Mudan Yihiin
Real Madrid ayaa diyaarsatay lacagtii ugu badnayd abid ee ay suuqa iibka ciyaartoyga geliso, waxaanay qaab wareer ah kaashka ugu farraqaysaa dhawr ciyaartoy oo marka uu suuqu furmo ay saxeexyadooda u dagaallami doonto.
Kooxda ka dhisan caasimadda Spain ayaa dibu-habayn ballaadhan lagu samayn doonaa marka uu suuqu furmo kaddib dhibaatooyinka hoos u dhaca ah ee haleelay xili ciyaareedkan.
Sida uu qoray wargeyska L’ Equipe ee kasoo baxa dalka Faransiiska, Zidane ayaa bartilmaameedsanaya dhawr ciyaartoy oo uu u kala qorsheeyey tallaabada koowaad iyo tallaabada labaad.
Wargeysku waxa uu sheegay in Zidane gacanta laga gelinayo jeeg lacageed oo ay ku qoran tahay €500 milyan, taas oo uu marka ugu horreysaba kaga hawlgeli doono sidii uu u heli lahaa weeraryahanka PSG ee Kylian Mbappe, kubbad sameeyaha Manchester United ee Paul Pogba iyo xiddiga Chelsea ee Eden Hazard.
Mbappe ayaa noqon doona ciyaartoyga ugu horreeya ee Zidane uu doonayo inuu heshiiskiisa helo, waxaana uu u diyaarinayaa lacagta ugu badan, laakiin waxa uu ogyahay in madaxweynaha PSG ee Nasser Al Khelaifi aanu doonaynin inuu halis geliyo mashruucii uu unkay laba xili ciyaareed ka hor ee uu lacagta badan kaga soo bixiyey da’yarkan iyo Neymar.
Eden Hazard ayaa uu Zidane ku kalsoon yahay inuu yahay ciyaartoyga uu sida ugu fudud ku heli karayo maadama uu dhaw yahay heshiiska uu kula jiro Chelsea oo inkasta oo dhawaan laga xayiray suuqa iibka haddana rajo fiican ka qabta inay ku guuleysanayso rafcaan ay ka qaadatay ganaaxa UEFA.
Paul Pogba oo dhawaan muujiyey inuu ku riyoonayo inuu u ciyaaro Real Madrid oo waliba ay xiise badan sii yeelatay markii uu Zidane kusoo laabtay, ayaa isaguna qayb weyn ka noqday mashruuca dibu-dhiska Los Blancos.
Geesta kale, Real Madrid ayaa lala xidhiidhinayaa weeraryahanka reer Senegal ee u ciyaara Liverpool, Sadio Mane.
Si kastaba ha ahaatee, damaca Real Madrid ayaa la eegi doonaa wax ka hirgala marka ay furanto sayladda kala-wareegga ciyaaryahannada ee xagaaga soo aaddan.